You chọrọ ịma ka esi eme ka ụgbọ gị CarPlay dakọtara? | Esi m mac
You chọrọ ịma ka esi eme ka ụgbọ gị CarPlay dakọtara?
Pedro Rodas kwuru | | Apple, Ngwaahịa Apple
Ọtụtụ oge anyị gwara gị banyere ohere, na-ewu ewu na-ewu ewu, na Apple nọ n'azụ ngosi ngosi nke ụgbọ ala eletrik nke ika ahụ. Agbanyeghị, maka ugbu a, ha bụ naanị asịrị ndị na-anaghị eme ka ọtụtụ ndị nyocha kwenye.
CarPlay bụ kacha nso Apple bụ ụgbọ ala taa na ọ bụ usoro igodo ụgbọ gị nwere ọ bụrụhaala na ọ dị n'ime ndepụta nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya bipụtara na weebụsaịtị ya.
Enweelarị ndị nrụpụta nke sistemụ stereo maka ụgbọ ala ndị mejuputara usoro CarPlay, mana ọ bụ ugbu a ka ụlọ ọrụ ụgbọ ala n'onwe ha ga-enwe sistemu a dịka ọkọlọtọ n'ụgbọ ala ha. Mgbe anyị gwara gị na ị nwere ike iji CarPlay ugbu a, ọ bụ na ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta, Dịka ọmụmaatụ, otu ndị ọsụ ụzọ na-arụkọ ọrụ agaghị echere maka ụgbọ ala a na-ekwu okwu ya.
Na Spain enwere ụzọ maka usoro ndị ga-adaba ma ọ bụ na sistemụ Apple na ụgbọ ala na onye ọrụ ibe anyị Ignacio Sala Ọ gwara anyị ogologo oge gara aga n’otu n’ime edemede ya.
Agbanyeghị, taa, anyị chọrọ igosi gị nhọrọ Ọsụ thatzọ ga-eweta CarPlay n'ụgbọala gị. Ọ bụ otu ndị na-etinye usoro nke ndị Cupertino chepụtara iji mee ka iPhone gị dakọtara na ụgbọ ala.
Ihe nlere di na nke m kari ihu n’ime oru bu AVIC-8000NEX. Na akụrụngwa a, mgbe emesịrị ngwa ngwa ya, ahụmịhe onye ọrụ ahụ dị mma, yabụ anyị chere na mgbe ọ na-abịa n'ụkpụrụ ụgbọ ala. ihe niile ga-arụ ọrụ dị ka amara ma jikọta ya na ime ụlọ nke ụgbọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » You chọrọ ịma ka esi eme ka ụgbọ gị CarPlay dakọtara?
Beta agafeela, Sonos na-ekwupụta mmekọrịta ya na Apple Music
Okwu ngwepịa sitere na onye nrụpụta iOS banyere Apple Watch